COP26: Warshadaha Dalxiiska waxay rabaan inay qayb ka noqdaan xalka isbeddelka cimilada khatarta ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wakhtiga waarta » COP26: Warshadaha Dalxiiska waxay rabaan inay qayb ka noqdaan xalka isbeddelka cimilada khatarta ah
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Jamaica News Breaking • Wararka Kenya • News • Dadka • Sacuudi Carabiya Warka • Wakhtiga waarta • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Dood-cilmiyeed ku saabsan dalxiiska oo xal u ah isbeddelka cimilada
Koox ku guulaystey isbedelka Cimilada ayaa la sameeyay maanta: Saudi Arabia, Kenya, Jamaica waxay ku biireen cududooda waxayna ku martiqaadeen kuwa kale COP26, Shirka Qaramada Midoobay ee Isbeddelka Cimilada.
Dalxiiska ayaa ahaa ajandaha maanta ee 26-aad ee Qaramada Midoobay Cimilada Change Shirka (COP26) gudaha Glasgow, UK
Ka soo safraya Suuqa Socdaalka Adduunka ee London kuna sii jeeday Glasgow si ay uga qaybgalaan COP26 waxay ahaayeen Hon. Ministeerri Dalxiiska Jamaaika Edmund Bartlett, Ministeerri Keeniyaa Najib Balalaati, Ministirri Muummee Sa’udii Arabiyaa Ahmed Aqeel AlKhateeb.
Wasiirka Sucuudiga ayaa khudbadiisa ku dejiyay qaabka dalxiiska loogu biirin lahaa is bedelka cimilada.
Saddexdan hoggaamiye ee dalxiiska ee ka kala socda Kenya, Jamaica, iyo Saudi Arabia ayaa maanta dejiyey habka socdaalka iyo dalxiiska adduunka ee COP26 ee Glasgow.
Ku biirista Ciidamada si Dalxiiska looga dhigo qayb ka mid ah Xalka ayaa ahayd doodii uu dhexdhexaadinayay madaxweynihii hore ee Mexico Felipe Calderon.
Sidoo kale waxaa guddiga ka mid ahaa Rogier van den Berg, Agaasimaha Caalamiga ah, Machadka Kheyraadka Adduunka; Rose Mwebara, Agaasimaha & Madaxa Xarunta Tignoolajiyada Cimilada & Shabakadda, UNEP; Virginia Messina, U doodista SVP, Socdaalka Adduunka & Golaha Dalxiiska (WTTC); Jeremy Oppenheim, Aasaasaha & Iskaashiga Sare, Nidaamsan, Nicolas Svenningen, Maareeyaha Waxqabadka Cimilada Caalamiga ah, UNFCCC
HE Axmed Caqiil Alkhateeb Waxa uu hadalkiisa ku yidhi:
Marti sharaf, Mudanayaal, iyo marwooyin.
Waad ku mahadsan tahay inaad nagu soo biirto maanta si aan u taageerno Xarunta Caalamiga ah ee Dalxiiska Sustainable.
Isbeddelka cimiladu waa arrinta ugu daran ee soo food saartay aadanaha, waana sababta aan halkan u joogno Glasgow.
Laba sano oo adag safar iyo dalxiis ka dib, socdaalku wuu soo laabanayaa.
In kasta oo tani ay tahay war wanaagsan oo loogu talagalay ganacsiyada dalxiiska meel kasta, waxaan u baahanahay inaan hubinno in kobaca mustaqbalka uu la mid yahay meeraheena.
Cilmi baaris ay daabacday Nature sanadkii 2018 ayaa lagu ogaaday in dalxiisku uu ka qeyb qaato 8% gaaska aqalka dhirta lagu sii daayo.
Warbixinta IPCC ee 2021 aad bay u caddahay.
Dhammaanteen waxaan u baahanahay inaan qaadno tallaabo adag oo degdeg ah, hadda, si loo xaddido saameynta isbeddelka cimilada.
Haddaba, maxaa la samayn karaa?
Heshiiska Paris waxa uu ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in xal loo helo isbeddelka cimilada oo dheellitiran baahida kobaca dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada.
Dalxiiska shaki la'aan waa warshad muhiim u ah dhaqaalaha caalamka.
In ka badan 330 milyan oo qof ayaa ku tiirsan noloshooda.
Faafida ka hor, mid ka mid ah afartii shaqo ee cusub ee laga abuuray meel kasta oo meeraha ka mid ah waxay ku jirtay dalxiiska.
Warshadaha dalxiiska, iyada oo aan la sheegin, waxay rabaan inay qayb ka noqdaan xalka isbeddelka cimilada khatarta ah.
Laakiin, ilaa hadda, ka mid noqoshada xalka ayaa aad u fudud in la sheego.
Taasi waa sababta oo ah warshadaha dalxiisku aad bay u kala qaybsan yihiin, adag yihiin oo kala duwan yihiin.
Waxay gooyaa qaybo kale oo badan.
In ka badan 40 milyan ganacsiyada dalxiiska -ama 80 boqolkiiba warshadaha oo dhan - waa kuwo yar ama dhexdhexaad ah.
Waa wakiilo socdaal, makhaayado, ama hudheelo yaryar.
Ma haystaan ​​raaxada waaxyo joogtaynta u go'an
ama miisaaniyada cilmi-baarista iyo horumarinta la xidhiidha.
Si aad u yar ayay u heli karaan kooxo la taliyayaal maamul ah oo mushahar sare leh kuwaas oo kala talin kara siyaabaha ay u gooyaan raadkooda kaarboon iyagoo ilaalinaya khadkooda hoose.
Natiijo ahaan, ilaa maanta, warshaduhu waxay leeyihiin - inkastoo ujeeddooyin wanaagsan - weli ma awoodaan inay door buuxda ka ciyaaraan caawinta xallinta caqabadaha isbeddelka cimilada.
Hadda, ugu dambeyntii, taasi way isbedeli kartaa.
Dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya, HRH Mohammed bin Salman ayaa ku dhawaaqay abuuritaanka gudaha Boqortooyada ee Xarunta Dalxiiska Sustainable Tourism Global Center.
Xaruntu waxay kulmin doontaa wadamo badan, isbahaysi dhinacyo badan leh.
Waxa ay bixin doontaa hagitaan iyo khibradda ugu wanaagsan ee qaybta, si aan u beddelno habkeena wadajirka ah ee wax looga qabanayo waaritaanka.
STGC waa mid xiiso leh sababtoo ah waxay u dhaqmi doontaa sidii meel ay ku kulmaan dadka ka socda waaxda dalxiiska, dawladaha, tacliinta iyo ururada caalamiga ah.
Xarun aan awood u yeelan doono in aan wax ka barano maskaxda ugu wanaagsan waaritaanka iyo in aan wadaagno aqoonta la xiriirta iyo waxqabadka ugu wanaagsan, si aan u dardargelinno u gudubka wadajirka ah ee aan u gudubno mustaqbalka saafiga ah.
Oo adigoo sidaas samaynaya ilaalinaya dabeecadda iyo taageerada bulshooyinka.
Muhiimad ahaan, waxay awood noo siin doontaa inaan samayno isbeddeladan isla markaana aan bixinno shaqooyin iyo korriin wadid anagoo dhiirigelinayna hal-abuurka iyo bixinta aqoonta, agabka, iyo hababka maalgelinta.
Waxaan rajeynayaa inaan Xarunta kala hadlo guddigan sharafta leh, anigoo u kuurgalaya sida STGC ay uga caawin doonto u gudubka warshadaha dalxiiska ee qiiqa eber-ka ah, iyo kicinta tallaabo lagu ilaalinayo dabeecadda iyo taageerada bulshooyinka.